Tinye Atụmatụ Atụmatụ Gị na Google Maps | Martech Zone
Ma ị bụ nnukwu ụlọ ahịa na-achọ ịdebe ụlọ ahịa gị, ụlọ ahịa azụmaahịa nke chọrọ ịkọwa ngalaba gị, ma ọ bụ ụlọ azụmahịa nke chọrọ ịtọ ndị nwe ya, oge eruola ịtọta atụmatụ ala gị na Google Maps Floor Plans.
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala na ụfọdụ ụlọ ahịa na-ere ahịa, dị ka nnukwu ụlọ ahịa, amalitela ịtọpụta ntọala dị na nnukwu ụlọ ahịa ahụ. Ruo ugbu a, ha egosighi na ha ziri ezi, agbanyeghị, ma eleghị anya ọ bụ ya mere Google ji emepe ya ka ndị ọrụ bulite atụmatụ nke ala ha! Ihe onyonyo a nke nnukwu ulo ahia anyi egosighi na obu ulo ahia ohuru - ebe ebe ulo ahia ndia di ezighi ezi.
Ọ bụrụ n’inweghị onyogho ọkọlọtọ nke atụmatụ ụlọ gị iji bulite, ịkwesighi ichegbu onwe gị. Nwere ike ịmepụta atụmatụ ụlọ gị iji tinye ngwá ọrụ Nkume Nkume.
Ozugbo inwetara ihe owuwu ụlọ ị mara mma, ị ga-ebupụ ya dịka faịlụ onyogho ọkọlọtọ. Mbupụ atụmatụ ala, bulite ya site na Google Maps Flos Plans, ma machie ya na ụlọ ahụ.
Dika ngwa ihe eji eme ihe na-emewanye ka o doo anya, na nnabata nke maapụ na ọrụ geolocation na-arị elu, gịnị ma ị hụ na atụmatụ ala gị gosipụtara nke ọma! Nke ahụ nwere ike iwetara ndị ọzọ okporo ụzọ gị oruru… na-enweghị nkụda mmụọ nke ahụghị ya na maapụ!
Tags: mepụta atụmatụ alambupụ atụmatụ alaatụmatụ alagoogle mapmapbulite atụmatụ ala
Nov 27, 2012 na 11:51 AM
Gịnị banyere ndị na-ewu ụlọ? Nwere ike ha bulite ala ha na google maps maka ụdịdị? Maka ụlọ a na-ewubeghị… dị ka ụzọ nyocha ahịa injinị ọchụchọ? Enwere ike ịnwale ule